इन्टरप्राइज चेम्बरमा एक जांच प्रक्रिया | Law & More B.V.
ब्लग » इन्टरप्राइज चेम्बरमा एक जांच प्रक्रिया
इन्टरप्राइज चेम्बरमा एक जांच प्रक्रिया
नोभेम्बर 13, 2020
यदि तपाईंको कम्पनी भित्र विवाद उत्पन्न भएको छ जुन आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न सकिदैन भने, इन्टरप्राइज चेम्बर अघि एउटा प्रक्रिया तिनीहरूलाई सुल्झाउनको लागि उपयुक्त साधन हुन सक्छ। यस्तो प्रक्रिया एक सर्वेक्षण प्रक्रिया भनिन्छ। यस प्रक्रियामा, इन्टरप्राइज चेम्बरलाई कानूनी इकाई भित्र नीति र मामिलाहरूको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरियो। यस लेखले संक्षिप्त रूपमा सर्वेक्षण प्रक्रिया र तपाइँले यसबाट के अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छलफल गर्नेछ।
सर्वेक्षण प्रक्रियामा Admissibility
एक सर्वेक्षण अनुरोध सबैलाई पेश गर्न मिल्दैन। आवेदकको रुचि जांच प्रक्रियामा पहुँच औचित्यको लागि पर्याप्त हुनुपर्दछ र त्यसकारण इन्टरप्राइज चेम्बरको हस्तक्षेप। त्यसकारण प्रासंगिक आवश्यकताहरूको साथ त्यसो गर्न अधिकार पाएका व्यक्ति कानूनमा पूर्ण रूपमा सूचीबद्ध छन्:
NV को शेयरधारक र प्रमाणपत्र धारकहरु. र BV कानून NV र BV को बीच अधिकतम € 22.5 मिलियन वा अधिक को पूंजी संग छुट पार्छ। पहिलेको अवस्थामा शेयरधारकहरू र प्रमाणपत्र धारकहरू जारी पूंजीको १०% पकड गर्दछन्। NV र बीभीको अधिक जारी पूंजी संग मामला मा, जारी पूंजी को एक% को एक थ्रेसोल्ड लागू हुनेछ, वा शेयर को लागी शेयर र निक्षेप रसीद एक विनियमित बजार मा प्रवेश गरीएको छ भने, न्यूनतम मूल्य € 10 मिलियन। कम थ्रेसोल्ड पनि संघको लेखमा सेट गर्न सकिन्छ।
यो कानूनी इकाइ आफै, व्यवस्थापन बोर्ड वा सुपरवाइजर बोर्ड मार्फत, वा ट्रफी कानूनी संस्थाको दिवालियापन मा।
एक संघ, सहकारी वा पारस्परिक समाजका सदस्यहरू यदि तिनीहरूले कम्तिमा १०% सदस्यहरू प्रतिनिधित्व गर्छन् वा सामान्य बैठकमा मतदानका लागि योग्य व्यक्तिहरू। यो अधिकतम persons०० व्यक्तिको अधीनमा छ।
कामदारहरूको संघ, यदि संघका सदस्यहरू उपक्रममा काम गर्दछन् र संघसँग कम्तिमा दुई वर्षसम्म पूर्ण कानुनी क्षमता रहेको छ।
अन्य अनुबंध वा वैधानिक शक्तिहरू। उदाहरण को लागी, कार्य परिषद।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि अनुसन्धानको लागि योग्य व्यक्तिले नीति र कम्पनी भित्रको मामिलाको बारेमा व्यवस्थापन बोर्ड र सुपरवाइजरी बोर्डलाई चिनिन्छ। यदि यो गरिएको छैन भने, इन्टरप्राइज डिभिजनले अनुसन्धानको लागि अनुरोध विचार गर्दैन। कम्पनी भित्र संलग्न ती पहिलो प्रक्रिया शुरू हुनुभन्दा पहिले आपत्तिहरूको जवाफ दिने मौका हुनुपर्दछ।
प्रक्रिया: दुई चरणहरू
प्रक्रिया याचिका पेश गर्दा र कम्पनीमा संलग्न पक्षहरू (उदाहरणका लागि शेयरधारकहरू र व्यवस्थापन बोर्ड) लाई यसको प्रतिक्रिया दिने अवसरको साथ सुरू हुन्छ। कानूनी आवश्यकता पूरा भएको खण्डमा 'सही नीतिमा शंका गर्ने उचित आधारहरू' छन् जस्तो देखिन्छ भने इन्टरप्राइज चेम्बरले उक्त याचिकालाई अनुमति दिनेछ। यस पछि, जाँच प्रक्रियाको दुई चरणहरू सुरू हुन्छन्। पहिलो चरणमा, नीति र कम्पनी भित्र घटनाक्रमको कोर्स जाँच गरिन्छ। यो अनुसन्धान इन्टरप्राइज डिभिजन द्वारा नियुक्त एक वा धेरै व्यक्तिहरू द्वारा गरिन्छ। कम्पनी, यसको ब्यवस्थापन बोर्डका सदस्यहरू, सुपरभाइजर बोर्डका सदस्यहरू र (पूर्व) कर्मचारीहरूले सबै प्रशासनलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ। अनुसन्धानको लागत सिद्धान्तमा कम्पनीले वहन गर्न सक्दछ (वा आवेदक यदि कम्पनीले उनीहरूलाई सहन सकेन भने)। छानबिनको नतीजामा निर्भर गर्दै, यी लागतहरू आवेदक वा व्यवस्थापन बोर्डबाट रिकभर गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानको रिपोर्टको आधारमा इन्टरप्राइज डिभिजनले दोस्रो चरणमा स्थापना गर्न सक्दछ कि त्यहाँ खराबी छ। त्यस्तो अवस्थामा, इन्टरप्राइज डिभिजनले धेरै दूर उपायहरू लिन सक्छ।
प्रक्रियाको बखत र (प्रक्रियाको पहिलो खोजी चरण सुरु हुनु अघि) इन्टरप्राइज चेम्बरले प्रश्नको हकदारको अनुरोधमा अस्थायी प्रावधान गर्न सक्नेछ। यस सम्बन्धमा इन्टरप्राइज चेम्बरसँग स्वतन्त्रताको ठूलो सम्झौता छ, जबसम्म कानुनी संस्थाको अवस्था वा अनुसन्धानको हितमा प्रावधानलाई जायज ठानिन्छ। यदि विकृति स्थापित गरिएको छ भने, उद्यम कक्षले पनि निश्चित कदम चाल्न सक्छ। यी कानून द्वारा राखिएका छन् र सीमित छन्:
प्रबन्ध निदेशकहरू, पर्यवेक्षी निर्देशकहरू, सामान्य बैठक वा कानूनी संस्थाको कुनै पनि अन्य निकायको एक प्रस्तावको निलम्बन वा रद्द गर्ने;
निलम्बन वा एक वा बढी प्रबन्धन वा निगरानी निर्देशकहरूको खारेज;
एक वा बढी प्रबन्धन वा पर्यवेक्षक निर्देशकहरूको अस्थायी नियुक्ति;
इन्टरप्राइज चेम्बरले संकेत गरे अनुसार संघको लेखहरूको प्रावधानबाट अस्थायी विचलन;
व्यवस्थापनको माध्यमबाट सेयरहरूको अस्थायी स्थानान्तरण;
कानूनी व्यक्ति को विघटन।
एन्टरप्राइज चेम्बरको निर्णयको बिरूद्ध क्यासेशनमा अपील मात्र दर्ता गर्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा इन्टरप्राइज डिभिजनको समक्ष उपस्थित भएका व्यक्तिहरूसँग कानूनी अधिकार रहेको छ, र कानुनी संस्थाका साथमा यदि यो देखा परेको छैन भने। Cassation को लागी समय सीमा तीन महिना छ। Cassation मा निलम्बन प्रभाव छैन। नतिजा स्वरूप, सर्वोच्च अदालतले विपरित निर्णय नभएसम्म इन्टरप्राइज डिभिजनको आदेश लागू हुन्छ। यसको मतलब सर्वोच्च अदालतको निर्णय ढिलो हुन सक्छ किनकि इन्टरप्राइज सेक्सनले प्रावधान गरिसकेको छ। जे होस्, क्यासेशन इन्टरप्राइज डिवीजन द्वारा अपनाईएको खराबीको सम्बन्धमा प्रबन्धन बोर्ड सदस्यहरू र सुपरवाइजरी बोर्ड सदस्यहरूको दायित्वको सम्बन्धमा उपयोगी हुन सक्छ।
के तपाईं एक कम्पनीमा विवादहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाईं सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ? को Law & More टोलीसँग कर्पोरेट कानूनको ठूलो ज्ञान छ। तपाईंसँगै हामी स्थिति र सम्भावनाहरू मूल्या assess्कन गर्न सक्छौं। यस विश्लेषणको आधारमा, हामी तपाईंलाई उपयुक्त अर्को चरणहरूमा सल्लाह दिन सक्दछौं। हामी तपाईंलाई कुनै पनि कार्यवाहीको बखत सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न खुसी हुनेछौं (इन्टरप्राइज डिभिजनमा)।
अघिल्लो पोस्ट प्रोबेशनरी अवधिको अवधिमा बर्खास्त
अर्को पोस्ट गुनासो